Part1: Waa maxay JUC600?
Part2: Features ee JUC600
Part3: Sidee JUC600 Works ah & qor
Part4: Dhibaatooyinka on JUC600: Saddex Su'aalaha Inta badan Badanaa La Is Weydiiyo
JUC600 si fudud loo qeexi karaa sida nooc ka mid ah Android Mirror cable USB ama adabtarada ugu horayn loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo noocyada kala duwan ee ku jira ka taleefanka si laptop ama PC. Marka la soo koobo, u dhaqmo sidii buundo isku xirta qalab mobile android iyo computer ah.
Iyadoo cable this, dadka isticmaala nuqul karaa oo si toos ah u taleefannadooda android paste fariimaha ka kombiyuutarka, isku shaandheyn iyo sidoo kale weyneeyo shaashadda telefoonka ee ay u helaan bandhig weyn. Sidoo kale, dadka isticmaala ay si raaxo leh ku qaadi kartaa wax la mid ah oo ku saabsan PC ee shaashadda. Iyada oo bandhig weyn, dadka isticmaala ku raaxaysan karaan ciyaaro, wareejin files, wuxuu heli kara ama ku diidi wacay iyo qoraalka ama ka jawaabaan fariimaha la isticmaalayo mouse iyo keyboard. Waxa kale oo sahlan in ay qaataan Screenshot ee telefoonka la cable ee meesha.
Waxaa si fiican u shaqeeya Android Operating System 2.3 / 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3
Waxaa gudbiya xog via Tababaraha file
Bandhigay qalab mobile android on laptop ama daaqadaha desktop computer
Oggolaanayaa wareeg iyo weyneeyey ee shaashadda telefoonka ee PC
Saamaxaya kuwa isticmaala inay soo diraan, hesho, si toos ah nuqul oo qoraalka koollada ka laptop xiran ama PC iyo qeybsanaan ku xigeenka / Taageerada mouse toos ah oo ka shaqeynayaan keyboard ka desktop ku xiran computer daaqadaha.
Wacay la heli karaa ama si fudud u diiday PC.
Shaashada Phone ee la qaadi karo si toos ah PC ka dibna badbaadiyey.
Video bandhigay kaliya noqon kartaa mid taageero ku wajahan qaababka sare tusaale Android 4.0
U shaqeeya duruufaha af-Multi
Ciyaaro kala duwan soo bandhigay ah weyneeyey
Marka adabtarada waxaa si guul ah ku xiran, waa ay fududahay in la isticmaalo qalab android sida haddii ay kombiyuutarka laftiisa. Dadka isticmaala ayaa ka ciyaari kara kulan ee ugu jecel yahay, soo dir ama u gurmadaan qoraalka, wax diidi ama aad heshid ugu wacay iyo sidoo kale Internetkana.
Si aad u gudbiyaan xogta, kaliya aad u baahan tahay si ay u jiidi folder ama file ka laptop ama computer meesha aad rabto in aad wareejiso. File doono ka dibna la soo guuriyeen meesha uu soo xulay.
Yaraynta ama badinta suuqa kala telefoonka ee sidoo kale waa mid fudud; users ka heli kartaa xalka fiiqan. Shaashadaha ayaa inta badan si toos ah isku shaandheyn laakiin haddii tan lagu fashilmo, waxa la samayn karaa gacanta. Sidoo kale, shaashadda telefoonka android lagu qabtay karo oo badbaadiyey si toos ah ugu xiran laptop ama computer.
Users si fudud nuqul karo iyo paste fariimaha ka computer daaqadaha qoraalka. Fariimaha waxaa soo bandhigay goobtii shaashadda qalab mobile android.
JUC600 saamaxaya kuwa isticmaala inay si toos ah u wac oo ay helaan farriimaha fariin. Ogeysiis Biibiile ayaa la soo bandhigay by software android muraayad mar kasta oo qof ku soo waca ama farriin qoraal ah ayaa lagu helay. User ayaa joojin kara gariirka ka soo saaray farriimaha soo socda ay si fudud u riixaya screen Seme.
Sida hore u soo sheegnay, users ka faa'iidaysan karaan keyboard iyo gacan ku haynta mouse. Iyadoo habkaani, users karaa 'Left Click', 'Click bidix' iyo 'Click iyo Slide.' Users isticmaali kartaa keyboard marka aad qortid aan la isticmaalayo screen xiriiri telefoonka marka jawaaba farriimo ama u diido ama la oggolaado wacay.
Su'aasha 1: My Phone ma aha in si guul leh Connected. Maxay noqon kartaa sababta loo sameeyey?
Haddii aad haysato dhibaato taas ka dibna waxaad u baahan tahay inaad samayso waxyaabaha soo socda:
1. Hubi in hab debugging la karti. Haddii ma ahan, ee waa awood.
2. Haddii aad tahay qof gaar ah in JUC600 xiran yahay iyo dhibaatada sii socoto, guji "Computer 'ka dibna bilowga menu, hubi haddii ay jirto' Android Mirror Drive". Haddii aan la heli karin, markaas ma jiraan wax xiriir ah oo dhan. Isku day inaad dib daarin ee dekedda USB computer kale oo aad u hubiso haddii tusiyaha LED waa nalalka.
3. JUC600 waxaa laga yaabaa khaldan halka amraya ka dib markii xidhiidhinaya telefoonka iyo kombiyuutarka. Wixii taageero farsamo, waxad ka heli kartaa khadka caawimada ee 888-988-0488 ama email u soo dir service@j5create.com.
4. Hubi in dekedda USB aad isticmaalayso waa la jaan aad muraayad android. Kan ugu talinayo waa USB 2.0, maxaa yeelay tiro iyaga ka mid ah tusaale ahaan USB 3.0 uma shaqeeyaan
5. Dhibaatada waxaa laga yaabaa in Android Debugging Bridge interface. Booqo Manager Device oo eeg haddii ay si sax ah uu ku rakiban. Darawalka A khalad ah ku rakiban waxaa ku deeqday su'aal ah iyo haddii arrinku sidan yahay markaa waa in aad uninstall waxaa markaas soo dajiyo darawal cusub. Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaad la xiriiri kartaa kooxda taageerada.
Su'aasha 2aad: xawaaraha Hawlgalka ayaa waxaa aad u hooseeyo, waxa dhibaatada?
Xawaaraha gaabis ah hawlgalka by loo saarin by;
1. Waxaa la hawlgala hab caadiga ah. Tani inta badan waxay dhacdaa marka aad isku daydo in aad isticmaasho telefoonka android ama qalab aan la taageeray by JUC600. Hubi haddii telefoonka aad isticmaalayso waa in liiska taageerada.
2. Tani waxay sidoo kale dhici karaa marka hab Turbo uu saaran yahay. Gaabis ah xawaaraha howlgalka sidoo kale sabab u noqon kara codsiyada ama barnaamijyada in qalabka. Waxaad u baahan tahay in kaalmo laga raadsado koox farsamo.
Su'aasha 3aad: bar loading waxaa baraf. Waa maxay dhibaatada?
Ma aha in aad si argagixin haddii aad haysato dhibaato sababtoo ah qalabka android la aqoonsan codsiga. Haddii dhibaato uu sii socdo, ka dibna isku day in ku dhow iyo goynta codsiga ka dibna la bilaabi telefoonka. Reconnect telefoonka ka dibna codsiga JUC600 mar kale ordo.
Su'aasha 4aad: Videos ma waafajinta karaa My Computer Screen
Dhibaatada waxaa laga yaabaa in android nooca aad isticmaalayso ku. Tiro ka mid ah qoraalkii android tusaale ahaan 2.xxx android iyo android 3.0 lama jaanqaadi karaan barnaamijka. Si aad u aragto camera videos aad, waxaad u baahan doontaa android 4.0. .
Su'aasha 5: JUC600 waddaa si habsami leh ku Codsiyada kale Laakiin aad u gaabis ah ku makiinada Function. Waa maxay sababta Behind Tani?
Tani waxay dhacdaa marka aad uma nooca wax weli keyboard dalwaddii bandhigo. Si loo xaliyo dhibaatada, booqo 'Goobta System Android' ka dibna riix 'Goobta' iyo ka dib in la xusho 'Language iyo Input' ka dibna doortay 'MctSoftKey'.
Tani waxay sidoo kale ku dhici kartaa marka aad ku qor ma karaan iyo sidoo kale u arkaan keyboard ee dalwaddii. Si taas loo saxo, waxaad u baahan tahay in la raaco hab la mid ah ee kor ku xusan
> Resource > Emulator > aqoonta ku saabsan J5